Ihe edemede Hannah O'Brien na Martech Zone
Edemede site na Hannah O'Brien
Hannah O'Brien na-ede akwụkwọ maka ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ Aumcore, nke nwere ọpụrụiche n’ịmepụta ahụmịhe nke ọnụọgụ abụọ jikọtara ya na atụmatụ ahịa ọdịnaya kacha elu.
Saturday, October 10, 2020 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Hannah O'Brien
Ekwenyela na Super Bowl kwa afọ nke United States chọrọ ihe karịrị 11 nde kilowatt-awa nke ike iji mee ka egwuregwu ahụ malite imecha. Nri nri Oreo na-eche ihe dị ka afọ abụọ maka oge mgbe ọ bụghị oge niile nke 11 nde kilowatt ga-aga nke ọma ma nwee ọkụ; naanị na oge maka ika igbu ha punchline. Na ihu ọma maka ụlọ ọrụ kuki, afọ ndị gara aga na Super Bowl XLVII, e mechara nwee a